Degso AVG VPN 1.12.841 loogu talagalay Windows
Madal: Windows Nooca: 1.12.841 Luqadda: English
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (20.90 MB)
Degso AVG VPN,
AVG Secure VPN waa bilaash barnaamijka VPN ee loogu talagalay Windows PC (kombiyuutar). Ku rakib AVG VPN hadda si aad u ilaaliso shabakadaada WiFi isla markaana si qarsoodi ah u baartid. AVG Secure VPN ama AVG VPN waa barnaamij bilaash ah oo VPN ah oo loogu talagalay Windows PC, kombiyuutarka Mac, telefoonka Android iyo isticmaalayaasha iPhone.
Si aad u ilaaliso shabakadaada WiFi isla markaana aad u dhex gasho internetka si khaas ah, dhagsii badhanka AVG VPN Soo qaado ee kor ku yaal si aad u soo dejiso barnaamijka VPN kombiyuutarkaaga. Waxaad isku dayi kartaa dhammaan astaamaha adeegga VPN lacag laaan 7 maalmood.
Soo dejiso AVG Secure VPN
Barnaamijyada VPN waxay bixiyaan badbaadin dhammaan shabakadaha WiFi meel kasta oo aad tagtid.
Waxay kaa ilaalinaysaa inaad ka ilaaliso shabakadaha WiFi iyo guriga, ha ahaato haddii aad internetka baarayso ama aad macaamil bangi samaynayso. Adeegyada VPN sidoo kale howlahaaga onlaynka ah waxay ka dhigaan kuwo gaar ah. Markaad siiso xiriir qarsoodi ah, waxay hubineysaa in deriskaaga, haakarisku, bixiyaha adeegga internetka iyo xitaa hayadaha rasmiga ahi aysan arkin waxaad ku sameyso internetka.
Barnaamijyada VPN waxay ku siinayaan marin aan xadidnayn adduunka oo dhan. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka xulato waddan kasta liiska server-yada caalamiga ah ee aan la aqoon oo aad caleenta iyo marin u hesho waxyaabaha aad mooddo inaad halkaas ku jirtay. Barnaamijka AVGs VPN wuxuu ku taagan yahay astaamaha soo socda:
Adeeg fudud oo xoog leh oo VPN ah: soo dejiso oo rakib VPN oo ku hubso xiriir aamin ah adigoo gujinaya badhanka.
Sir-gelinta heerka-milateri: Heerka sir-gelinta ee heerarka 256-bit AES wuxuu ka ilaaliyaa macaamilladaada khadka tooska ah indhaha indho-sarcaadka.
In ka badan 50 meelood oo laga kala xusho: Adeegyada warbaahinta ee gaarka loo leeyahay ayaa kaa caawinaya inaad ka fogaato bandhigyada aad ugu jeceshahay inta lagu jiro safaradaada.
Waxaa loo isticmaali karaa ilaa 5 aalado isku mar: VPN-kan waxaa loo isticmaali karaa aalado kale oo badan oo aan ka aheyn kombuyutarkaaga Windows: Waxaad sidoo kale ku isticmaali kartaa qalabka Mac, Android iyo iOS.
30-maalmood oo lacag-celin dammaanad ah: Marka hore tijaabi, khatar laaan; Haddii aadan ku qanacsaneyn, lacagtaada waa la soo celin doonaa. Dhib ma leh, xarig kuma xirna.
AVG Secure VPN (AVG VPN) waa fududahay in la isticmaalo; Waxaad ku helaysaa isku xirka VPN saddex tallaabo oo kaliya:
Ku xir shabakadda WiFi ee aad rabto: Guriga, shaqada, dugsiga, kafeega, garoonka diyaaradaha ama dukaan - barnaamijka AVG VPN ayaa ka shaqeeya meel kasta.
Daar Secure VPN: Bilow Secure VPN oo guji badhanka Furan. Waxaad dooran kartaa meel ka duwan wakhti kasta.
Si ammaan ah oo qarsoodi ah u baari: baadi-goob qarsoodi ah, cinwaanka IP-ga oo qarsoon, meel lagu qariyo, oo dhammaantood hal guji!
AVG VPN Noocyada
Cabirka Faylka: 20.90 MB
Horumar: AVG Mobile Technologies
Wararkii Ugu Dambeeyay: 20-04-2021